MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-10-13
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ ရေးဆွဲပြီးဟု ဦးအောင်မင်းပြော
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် အခြေခံ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ(Frame Work)ကို အစိုးရနှင့် တပ်မတော် က ရေးဆွဲပြီးဖြစ် ကြောင်း အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်း မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ကေအိုင်အိုနှင့်အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီအကြား ဆွေးနွေးပွဲကာလအတွင်း ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ဦးအောင်မင်းက ထိုသို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 10/18/2013 03:00:00 PM No comments:
အောက်တို ဘာ (၁၈) ရက်နေ့တွင် လိုင်ဇာမြို့၌ ကေ အိုင်အို ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များမှ လူထုရှင်း လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။
အောက်တို ဘာ (၈၊၉၊၁၀) တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကေအိုင်အို အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဗမာအစိုးရ ကိုယ်စား လှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို လိုင်ဇာပြည်သူလူထုအား ကေအိုင်အို ကိုယ်စား လှယ်များ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဤရှင်းလင်းပွဲသို့ ပြည်သူလူထု (၃၀၀၀) ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
at 10/18/2013 01:50:00 PM No comments:
at 10/18/2013 10:37:00 AM No comments:
at 10/18/2013 09:03:00 AM No comments:
at 10/17/2013 04:10:00 PM No comments:
at 10/17/2013 08:56:00 AM 1 comment:
ဗမာစစ်တပ်မှ လူနေရွာထဲသို့ လက်နက်ကြီးပစ်ထည့် ရွာသား ကလေးငယ်(၂)ဦးဒဏ်ရာရ(၁)ဦးသေဆုံး
၁၅.၁၀.၂၀၁၃. ရက်နေ့ ညနေ(၅း၃၀) အချိန် KIA, တပ်မဟာ (၃) လက်အောက်ခံ KIA, တပ်ရင်း (၁၂) ဒေသ၊ အတွင်းသို့ ကျူးကျော် နယ်ချဲ့ ရောက်ရှိနေ သော မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် (ခ.လ.ရ-၆၉) နှင့် (ခ.မ.ရ-၃၂၃)တပ် တို့သည် အပစ်မဲ့ရွာသားများနေထိုင်ရာ ဂျယ်အူရွာ အနီးရှိ နမ်ဟောမ် ရွာထဲ သို့ အကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ ၄င်းလက်နက်ကြီးကျည် (၁) လုံးသည် နမ်ဟောမ် ရွာထဲသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲ သဖြင့် အပြစ်မဲ့ ရွာသား ဦးဝင်းတင် နှင့် ဒေါ်သဲသဲ တို့ ၏သား မောင် ညီညီ (၁၄) နှစ် နှင့် မောင်ဇော်မျိုးချစ် (၃)နှစ် တို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး၊ တရုတ်ကလေး (၁)ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
at 10/17/2013 08:50:00 AM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေသည့်ကြားမှ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေသို့ အစိုးရစစ်အင်အားများဖြည့်ဆဲချိန်တပ်မ ( ၉၉) နှင့် KIA တပ်ရင်း (၁၂) ကြား ယမန်နေ့ ညနေ ၅ နာရီချိန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
KIA တပ်မဟာ (၃) မပိန်းမြို့နယ် တပ်ရင်း (၁၂) ဂျေဟူးအနီး နမ်ဟောမ် (Nam Hawm) တွင် အင်အား ၁၀၀ ကျော်ရှိသည့် မြန်မာအစိုးရတပ် တပ်မ (၉၉) နှင့် မိနစ် ၂၀ ခန့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မဟာ (၃) အရာရှိတဦးပြောသည်။
at 10/17/2013 08:36:00 AM No comments:
at 10/16/2013 09:22:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဿနာ ဖြစ်သည်။ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ(၃)မျိုးတွင် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံသည် စစ်တပ်ကို အာဏာအများဆုံးပေးထားပြီး ပြင်ဆင်ရန် မလွယ်ကူသည့် ဖွဲ့စည်းပုံကြီး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃-ခုနှောင်းပိုင်းတွင် ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ရေးဖို့သော်လည်းကောင်း၊ ပြန်ရေးဖို့သော်လည်းကောင်း အားပြိုင်မှုများ ပြင်းထန်လာမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄-ခုနှစ်တွင် Democratic Federation of Burma ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာမည်ဟု ယူဆရသည်။
at 10/16/2013 01:22:00 PM No comments:
at 10/16/2013 01:14:00 PM No comments:
ဗုံးဖေါက် တဲ့ ငနဲက တော်တော် နောက် တယ် နားရွက်တံတွေး တို့သွားသလိုပဲ….့ ထရိတ်ဒါး ဟော်တယ်ကြီးမှာ တက်ပြီး အိုင်ဒီအစစ်နဲ့ တည်းခိုတယ်၊ ပြီးတော့ တော်တော် ငွေရွှင်နေ ပုံပဲ.. တိုင်စီ မောင်းသူကို ငွေ ၇ သောင်း ချပေး သွားတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အိုင်ဒီ ကို လဲ ထားသွားပေး တယ်..ပြီးတော့ သူနေတဲ့နေရာကို လာလမ်း အတိုင်း ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးတန်းပြန်တာ… သူ့နေရာက ဒီကဘေီအေတွေ . .ဘော်ဒါဂတ်တွေ ဇယားရှုပ်နေတဲ့နေရာ သူ့မွဲထ ဆိုတဲ့ရွာကတဲ့…တရွာလုံး မှတ်ပုံတင် မရှိတာ ..ဗုံးဖေါက်ခါနီးမှ မှတ်ပုံတင်. .ကောက်ခါငင်ခါ လုပ်လိုက်ပုံရ တယ်…ဟူး ….စိတ်မောရပါ လား တိုင်းပြည်ရယ်…သူ့ကို မိတဲ့အချိန်နဲ့ စစ်ကိုင်းမှာ ဗုံးကွဲတဲ့ အချိန်က…တချိန်တည်းပဲတဲ့….. သေပြီဆရာ …နံရိုးတွေ အနည်းဆုံး ..၁၀ ချောင်းတော့ သေချာတယ်…..၀န်မခံရင် သေဒဏ် …လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် …..လုပ်တယ်သာပြော..တရားရုံးကျော်သွား တာနဲ့ မင်းကိစ္စ လွတ်ပြီ…..
at 10/16/2013 09:05:00 AM No comments:
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေ လိုအပ်သောနေရာ များ တွင် ပြင်ဆင်မည်လား ၊ သို့မဟုတ် အသစ်ရေးဆွဲ မည်လား ဆိုသော ပြတ်သားမှုမရှိသည့် ဒွိဟ အစီစဉ်အား လူထုအကြားချပြရန် စိုင်းပြင်းလားပြီးနောက် ဗုံးသံ ပေါက်ကွဲသံနှင့် လက်ပံတောင်းမှ ငိုယိုအော်ဟစ်သံ မလက်တို့မှ ငြီးတွားသံတို့ တပြိုင်နက် ထွက်ပေါ်နေကြသော ကာလတွင် ကာချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ၁၉ ကြိမ်တိုင် အာဏာသိမ်းဖူးသော ထိုင်းနိုင်ငံကိုသဘောကျလွန်းသည်ဟု သူ၏ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဇန်နာဝါရီလ ၉ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အလည်ပတ်မထွက်ခင် နှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်းမှ သူ၏ ဒုတိယမြောက် ထိုင်းနိုင်ငံခရီး ထွက်ပြီး ကာလ နောက်တွင် ကာကွယ်ရေးရုံတွင် ပြောကြားဘူးသည်။
at 10/16/2013 08:58:00 AM No comments:
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသူများ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြစ်ဆုံရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသူများမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲနေပြီး စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် အဆိုပါ စီမံကိန်းကို နောက်ဆုတ်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအား တောင်းဆိုလျှက်ရှိသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွေ့ရမည့် ရွာပေါင်း ၄၇ ရွာ၊ အိမ်ထောင်စု ၁၉၀၄ စု၊ လူဦးရေ ၁၀၅၀၅ ဦးရှိပြီး လက်ရှိတွင် မြစ်ဆုံ(မလိဇွပ်)၊ တန်ဖဲ့၊ ရွေပါး၊ ကဒန်ပါ၊ ဒွန်ဘန်၊ လဖျဲ့စသည့် ကျေးရွာများမှာ အောင်မြင်သာကျေးရွာနှင့် မလိယန်ကျေးရွာသို့ ရွေ့ပြောင်း နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။ အောင်မြင်သာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၃၁၇ စု၊ လူဦးရေ ၂၀၇၅ ဦး၊ မလိယန်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၂၀ စု လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော် ရှိပြီး အများစုမှာ ၀မ်းစာရှာဖွေရန်ပင် အခက်အခဲ တွေ့လျှက်ရှိသည်။
at 10/16/2013 08:40:00 AM No comments:
at 10/15/2013 10:31:00 PM No comments:
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရန် ချဉ်းကပ်သင့်သည့် အခြေခံများအပေါ်ဆန်းစစ်ချက် (၂)။ "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘယ်လဲ"
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လှုပ်ရှာမှုများ အားကောင်း ကောင်း ပေါ်လာချိန်တွင် အယ်န်အယ်လ်ဒီသည် ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတ၀ါး ဖြစ်နေပုံရသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရန် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖေါ်ဆောင်သွားမည်ကို ယခုအချိန်အထိ ရှင်းလင်းသည့် မူဝါဒ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် မတွေ့ ရ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်နှင့် ထိမ်းသိမ်းမခံရခင် ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်တွေ့ ဆုံပွဲ ကျင်းပခဲ့ သည်။ ယင်းတွင် နိုင်ငွေသိမ်း (မွန်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး) ၏ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချက် အကျဉ်းချုပ်မှာ “တိုင်းရင်းသား တန်းတူရေးကို အာမခံချက်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းမရှိတော့တဲ့ အခါမှာ သူ တည်ဆောက်နေတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြီးဟာ ပြိုကွဲသွားပါတယ်။
at 10/15/2013 10:25:00 PM No comments:
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကာလုံလက်မှတ် ထိုးရမည်ဟု UNFC တောင်းဆို
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးတွင် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီဝင်များဖြစ်သော နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်တို့ တက်ရောက် လက်မှတ် ထိုးရမည်ဟု ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) က တောင်းဆိုချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်း UNFC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောဒေးဗစ်သာကပေါက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် UNFC သဘောထားများကို အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော UNFC ကောင်စီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
at 10/15/2013 10:21:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်တွင် နယ်မြေမငြိမ်းချမ်းသောကြောင့် ရပ်နားလိုက်ရသော တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရှစ်ခု အား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့်အချိန်ကို မြန်မာဘက်က မပြောနိုင်ခြင်းကြောင့် ယင်းစီမံကိန်းများမှ ပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်သယ်ယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
at 10/15/2013 10:17:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားအထက်ဘက် မေခမြစ်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ချီဖွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကေန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဖို့ ၀ိုင်းမော်နဲ့ မြစ်ကြီးနားဘက်ကို ဓာတ်အားတိုင်တွေ သွယ်တန်းနေပြီလို့ ကချင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ဒေါ်မရန်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ဘယ်နေရာတွေကို အဓိက ပေးမယ်၊ ဈေးနှုန်း ဘယ်လောက် ကောက်ခံ မယ်ဆိုတာကိုတော့ တရုတ် စီပီအိုင်တာဝန်ရှိသူတွေ၊ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်တွေ ညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်။
at 10/15/2013 07:32:00 PM No comments:
at 10/15/2013 07:27:00 PM No comments:
at 10/15/2013 07:26:00 PM No comments:
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှင့် အစိုးရငြိမ်ချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် များ ဆွေးနွေးမှုအပြီး အစိုးရတပ်ဖက်မှ KIA တပ်မဟာ (၃)၊ တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေများသို့ စစ်အင်အားဖြည့်ခြင်းများ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်ညနေတွင် လားရှိုးမှ အစိုးတပ်သည် စစ်ကား ၆ စင်းဖြင့် KIA တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေသို့ တိုးချဲ့လာရာ စစ်ကား ၂ စင်းတွင် ၆၀ မမ လက်နက်ကြီး ၁ ခုစီတင်ကာ ၁ စင်းတွင် ကွတ်ခိုင်ဗျူဟာသို့ဖြည့်ထားပြီး၊ ကျန် ၃ စင်းသည် စင်လီနှင့် ကွန်လွန် စခန်းသို့ ဖြည့်ထားကြောင်း တပ်မဟာ (၄) မှ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိတဦးပြောသည်။
at 10/15/2013 04:37:00 PM No comments:
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆောင်ရွက် မည်ဆိုပါက နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် စသည့် ခေါင်း ဆောင်များ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးပေးရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့များက တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
at 10/15/2013 04:35:00 PM No comments:
မန်စီမြို့နယ်အတွင်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ထပ်မံရောက်ရှိ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေဟုဆို
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ရှိနေရာ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်အတွင်းမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများ ထပ်မံရောက်ရှိလာသဖြင့် ၄င်းတို့၏ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေသည်ဟု ဖန်းခါးကုန်း
ကျေးရွာမှ သိက္ခာတော်ရဆရာ ဦးခဘရာဇော်ဘောက်က ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်မှစတင်ကာ မန်စီမြို့နယ်တွင်း အစိုးရ၏ စစ်ကြောင်းများ ရောက်ရှိလာသဖြင့် နားအူကြီး၊ နားအူလေး၊ နန့်လဲကျေးရွာများမှ ၁၃၀ ကျော် စတင်ရောက်ရှိလာရာမှ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကဒုတ်၊ နမ်ထွဲ၊ ကောင်ရုန် စသည့် ကျေးရွာများမှ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာသဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ဒုက္ခသည် ၂၁၈ ဦးရှိလာကာ ၎င်းတို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် အထောက် အပံ့များ လိုအပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
at 10/15/2013 02:43:00 PM No comments:
ယနေ့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ အစိုးရ ခြေလျင် /ခြေမြန် တပ်ရင်းပေါင်း ၄၄ ရင်း အမြဲတမ်း အခြေချ တပ်စွဲထား သည်။ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ) လက်အောက်တွင် မိုးညှင်း၌ ခလရ - ၁၅ ၊ မြစ်ကြီးနားတွင် ခလရ - ၂၁၊ ၂၉၊ ၃၇၊ ပူတာအိုတွင် ခလရ - ၄၆၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈၊ ဝိုင်းမော်တွင် ခလရ - ၅၈၊ မိုးကောင်းတွင် ခလရ - ၇၄၊ ဆားမှော်တွင် ခလရ - ၁၀၅၊ လားအိုး(ငါးအိုး)တွင် ခလရ - ၁၂၀၊ ၁၂၁၊ ဆင်ဘိုတွင် ခလရ - ၁၄၁၊ ဒေါ့ဖုံးယန်တွင် ခလရ - ၁၄၂၊ ဗန်းမော်တွင် ခလရ - ၂၃၆၊ မယန်းတွင် ခလရ - ၂၆၀၊ တနိုင်းတွင် ခမရ - ၃၁၈၊ ရွှေညောင်ပင်တွင် ခမရ - ၃၂၁၊ ၃၂၈၊ မိုးမောက်တွင် ခမရ - ၄၃၇၊ ပင်းဘောတွင် ခမရ - ၅၂၁ တို့ အခြေစိုက်ထားသည်။ ဒကစ (တနိုင်း) လက်အောက်တွင် တနိုင်း၌ ခလရ - ၈၆၊ ၂၃၈၊ ၃၁၉၊ ရှာဒူဇွပ်တွင် ခလရ - ၂၉၇၊ ဒေါင်ဘန်း၌ ခလရ - ၂၉၈ တို့ တပ်စွဲထားသည်။
at 10/14/2013 01:29:00 PM No comments:
ဖားကန့်ထွက်ကျောက်မျက် မြစ်ကြီးနားသို့ တရားဝင်သယ်ယူရောင်းချခွင့်ရရှိရေး ဆက်လက်တောင်းဆိုမည်
ဖားကန့်ဒေသထွက် ကျောက်စိမ်းကျောက်မျက်များအား မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ တိုက်ရိုက်သယ်ယူရောင်းချ ခွင့်ရရှိရေးကို သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနထံ ထပ်မံတင်ပြတောင်းဆိုသွားမည်ဟု ကချင်ပြည်နယ် ကျောက် မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသောင်းကြည်က မဇ္ဈိမသို့ ပြီးခဲ့သည့်သော ကြာနေ့က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် အပါအ၀င် မန္တလေးနှင့် ကချင်ပြည်နယ် ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းတို့နှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
at 10/14/2013 01:28:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာတွင် ယခုလကုန် ကျင်းပရန်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးပွဲ၌ တစ်ပြည်လုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားများ ချမှတ်နိုင်မည်ဟု ညီညွတ်သောတိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ၏
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ် အတွင်းရေးမှူး (၂) လည်း ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက ပြောကြားခဲ့သည်။
at 10/14/2013 01:19:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Ginjaw Ginra Ginwang GinjawaMasat Yan (2) Uphkang Du Majat Wunkat Yu Hpawng hpe Ninghtoi;- 12/10/2013 ya jahpawt hkying (8:00 AM) ten hta Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw, Masat (5) Dap Ba, Padang Ninghkawng Gawknu hta angwi apyaw hte galaw la lu sai lam na chye lu ai. Dai hpawng hta Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Uphkang Du, Slgk. Maji Naw Mai (Div.O) kaw nna Wunkat Yu Uphkang Du ni hpe numhtet numra shatsam mungga shaga ai lam chye lu ai.
Wunkat Yu Hpawng hta du sa ai Dap shawa yawng marai (70) daram sa du shang lawm ai lam chye lu ai.
at 10/13/2013 08:06:00 PM No comments:
(၁၂.၁၀.၂၀၁၃)ရက်နေ့ KIO,ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၏ လိုင်ဇာဌာနချုပ်သို့ အပြန်ခရီးစဉ်အား မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ကချင်လူထု အင်အား (၂သောင်း) ကျော်လိုက်လံပို့ဆောင်နုတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
at 10/13/2013 09:18:00 AM No comments:
မြစ်ကြီးနားနှင့် ၀ိုင်းမော်ဒေသမှ ပြည်သူ ၂ သောင်းခန့် KIO ခေါင်းဆောင်များကို ပို့ဆောင်နုတ်ဆက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈-၁၀ အတွင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်းတွင် ပြုလုပ်သော အစိုးရနှင့် KIO တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရောက်ရှိလာကြသော KIO ခေါင်းဆောင်များကို ဒေသခံပြည်သူ ၂ သောင်းခန့် ပို့ဆောင်နုတ်ဆက်ကြကြောင်းသိရသည်။
at 10/13/2013 09:05:00 AM No comments:
at 10/13/2013 09:03:00 AM No comments:
တိုက်ပွဲများတွင် ဖမ်းဆီးရမိသူများ၊ လက်နက် ချပြီးသူများအား လူသားဆန်စွာ ဆက်ဆံပြီး နည်းမျိုးစုံဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း အပါအ၀င် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ပြုမူဆက်ဆံခြင်း မပြုလုပ်ရန် တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့ သဘောတူ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှ ၁၀ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO) တို့၏ သုံးရက်ကြာ ပြည်ထာင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူညီချက်များတွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲများတွင် ဖမ်းဆီးရမိသူများ၊ လက်နက် ချပြီးသူများအား လူသားဆန်စွာ ဆက်ဆံပြီး နည်းမျိုးစုံဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း အပါအ၀င် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ပြုမူဆက်ဆံခြင်း မပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
at 10/13/2013 09:02:00 AM No comments: